Flights si Hawaii na American Samoa na ụgbọ elu Hawaiian ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Flights si Hawaii na American Samoa na ụgbọ elu Hawaiian ugbu a
Airlines • Airport • Akụkọ Samoa America na -agbasa • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ụgbọ elu Hawaiian na -amalite ọrụ na -akwụsịghị akwụsị n'etiti Honolulu's Daniel K. Inouye na ọdụ ụgbọ elu mba ofesi America Samoa Pago Pago ya na ụgbọ elu Airbus A330.
Ụgbọ elu Hawaiian amaliteghachila ụgbọ elu na American Samoa.
Ndị ụgbọ elu Hawaiian ga -enye ụgbọ elu abụọ kwa ọnwa.
Ụgbọ elu Hawaiian Airlines Airbus A330 ga -eje ụzọ Hawaii na American Samoa.
Ụgbọelu Hawaii na -emegharị Honolulu (HNL) na American Samoa (PPG) site na ịmalitegharị ụgbọ elu na -akwụsịghị akwụsị n'etiti Hawaii na US Territory n'izu na -abịa. Hawaiian, nke kwụsịtụrụ ọrụ HNL-PPG ugboro abụọ kwa izu na mbido ọrịa COVID-19 na Machị 2020, ga-enye ụgbọ elu abụọ kwa ọnwa malite na Mọnde ruo Disemba 20.
Brent Overbeek, onye osote onye isi oche maka nhazi netwọk na njikwa ego na Hawaiian ụgbọ. "Dị ka ndị agbata obi agwaetiti Pacific, anyị ghọtara etu ndị ọbịa anyị siri dabere na ọrụ anyị, anyị na -atụkwa anya ijikọ ezinụlọ na ndị enyi n'enweghị nsogbu."
Hawaiian, nke na -enye naanị njikọ ikuku a na -ahazi oge niile n'etiti ụdọ agwaetiti abụọ ahụ, kwụsịtụrụ ụgbọ elu ọnwa 17 na arịrịọ gọọmentị Samoa nke America. Na Jenụwarị 13, Hawaii malitere ịrụ ọtụtụ ụgbọ elu nke ịlaghachi mba ọzọ iji wetara American Samoa puku kwuru puku ndị bi n'ụlọ tọrọ atọ na Hawaii, ala US na karịa.
Ndị njem na American Samoa ga-agbaso usoro usoro ahụike na nchekwa gọọmentị, gụnyere ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi yana nsonaazụ ule tupu njem. Enwere nkọwa ndị ọzọ na weebụsaịtị TALOFApass. A chọrọ ndị ọbịa na-efega Hawaii ka ha mepụta steeti akaụntụ Njem Nchedo Hawai'i ma bulite kaadị ịgba ọgwụ mgbochi ma ọ bụ ule tupu njem emee iji zere ịkpọpụ iche mgbe ha bịarutere.
Hawaiian ga-aga n'ihu jiri ụgbọ elu Airbus A278 nke nwere oche 330 nwee nnukwu ahụ.